FANABEAZAM-PIRENENA : Mpampianatra 500 mahery nahazo fifanarahana arak’asa
Fifanarahana arak’asa "Contrat de travail" mihoatra ny 500 isa indray no nozarain’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika ary ny fanofanana arak’asa, tamin’ny sabotsy 18 janoary 2020 lasa teo. 20 janvier 2020
Tafiditra ao anatin’ ireo nizarana izany ireo mpiofana ho mpampianatra nivoaka tamin’ny seha-pampianarana CRINFP eto Analamanga ary indrindra koa ireo mpampianatra FRAM nomen’ny Filoha Andry Rajoelina toky fa horaisina ho mpiasam-panjakana, tany tamin’ireo sekoly vitsivitsy notsidihiny nandritra ireny fitetezam-paritra tamin’ny toana 2019 ireny.
Ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arak’asa, Marie Thérèse Volahaingo no nanolotra izany fifanarahana arak’asa izany ho an’ireo solontenan’izao andiany izao. Ny mpampianatra nandalo fiofanana, hoy izy, dia antoka ho fanatsarana ny kalitaon’ny fanabeazana. Ampirisihina sy entanina izy ireo mba hamonjy haingana ny toeram-piasana hanao ny "prise de service", handray avy hatrany ny asa napetraka tamin’izy ireo.
Izao no natao moa dia ho fanamaivanana ny vesatr’ireo ray aman-dreny amin’ny adidy iantsorohan’izy ireo amin’ny FRAM. Notsidrian-dRamatoa Minisitra tamin’ny lahateny izay nataony koa fa efa mizotra tsikelikely ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpianatra nahavita ny fianarany tao amin’ny ENS amin’izao fotoana izao ary efa eo am-pandaminana izany ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany. Tsiahivina hatrany fa 8500 no mpampianatra nofaritan’ity Minisitera ity horaisina ho mpiasam-panjakana nanomboka tamin’ny taona 2019 lasa teo.
Ny 600 amin’ireo dia mpampianatra any amin’ny teknika ary ny 7900 mpianatra eo anivon’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena. Ankoatra ireo teto Analamanga, anisan’ireo efa nahazo fifanarahana arak’asa koa ny mpianatra niofana tao amin’ny CRINFP Atsimo Andrefana, Diana, Sava, Bongolava, Alaotra Mangoro, Betsiboka, Atsinanana ary Sofia. Nanantitra ny Minisitra fa tsy hiandry ela fa amin’ity herinandro ity ihany dia hozaraina koa ny an’ny faritra hafa ankoatra ireo.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68231) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (646) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (395) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (176) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (84) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (77) 21 février 2020